SomaliTalk.com » 2011 » November » 20
Home » Archive Maalinta November 20th, 2011
Muqdisho, November 20,2011—–Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali ayaa maanta ku dhawaaqay guddiga Wadajirka ah ee habraaca marxaladda kala guurka ah “Rodmap” 2011/2012. Dhaqangelintii Roadmap ka ayaa u socda si habsami ah iyadoo lagu guuleystay in wax badan laga qabtay howlahii uu tilmaamayey habraaca marxaladda kala guurka “roadmap” 2011/2012. Hoos ka dhegeyso...
Halkudheg: gaas, Roadmap
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Jubada Hoose waxay sheegayaan in Afar Doonyood oo kuwa dheereeya oo ay ku rakiban yihiin Hub Noocyadiisa kala duwan ay weerar ku qaadeen Maraakiib Dagaal oo laga leeyahay Dalka Kenya oo ku sugnaa Meel ku dhow Xeebta Kudhaa gaar ahan Jasiirada Midhaawa . Sii Akhri Read More →
Warsaxaafadeed: Ra’iisl Wasaaraha oo maanta u dukaameysi tegay Suuqa Bakaaraha
Warsaxaafadeed ka soo baxay DFKMG: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta u dukaameysi tegay Suuqa Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada dalka isla markaana ay dowladdu dib u howlgelisay kadib markii waqti kooban uu hakat galay howlihiisii ganacsi. Ra’iisul Wasaaraha oo ay safarkiisa ku wehlinayeen saraakiisha Booliska iyo kuwo...
Muqdisho Magaaladii Islaamka Badbaadisay
Taariikh ku saabsan Muqdisho oo ka dahsoon Soomaali badan – “Haddii aysan Muqdisho jerteen Maka iyo Madiina waxay ahaan lahaayeen ama kujiri lahaayeen gacanta saliibiyiinta” Buugga Majdī Naṣīf. SII AKHRI Read More →
Halkudheg: muqdisho, xaydar